BOSAASO: BAAFIN QANDARAASLE MASHRUUCA DHISMAHA WADDO – Radio Daljir
Seteembar 22, 2021 7:00 g 0
Xafiiska Qandaraasyada D/hoose Bosaaso
Procurement Officer Bosaso
Golaha Deegaanka Degmada Bosaaso waxa uu Baahinayaa Samayn waddo Laami ah oo dhan 1,500 m, isagoo ka helay Mashruuca bahwadaagta ay ku yahiin DPL , D/hoose iyo hay’addaha ku midoobay Magaca JPLG/LDF , Mashruucaas oo laga fullinayo Magaalada Bosaaso.
Samayn Waddo Laami ah oo dhan dherer 1,500 m x Balac 7mx 0.5cm, kana soo bilaabata halka loo yaqaan Maqaska ee Airporka aada kuna dhammaata Aaga Hotel Village.
Sidaas darteed, waxaa dhammaan lagu wargelinayaa Shirkadaha Maxaliga iyo Caalamaiga ahba ee wax dhisa iyo cid kasta oo samayn karta waddo laami oo Asphalt ah inay ka soo qabygalaan tartanka qandaraaska waddadaas.
Buugga ka qaybgalka Qandaraaska oo dhameystiran waxaa laga heli karaa Xafiiska Qandaarasyada ee Degmada Bosaaso .
Tartamuhu waxa uu bixinayaa lacag dhan $20 oo ah qiimaha uu buugga qandaraaska ku iibsanayo, Waxaana la siinayaa risiit rasmi ah oo caddaynaya in uu lacagtaas bixiyey.
Tartamuhu waa in uu Buugga uu ku tartamayo (bid) uu ku soo lifaaqaa nuqul ka mid ah risiitka lacagtii uu bixiyay ee $20ka dollar ahayd .
Qabashada Dokumitiyada Tartamayaasha waxay bilaabanaysaa Taariikhdu markay tahay 23/09/2021), Saacaduna tahay 9:00 Am ,waxayna xirmaysaa Taariikhdu markay atahy 07/10/2021 saacaduna tahay 12:00ka Am( Duhurmino) ,isla waqtigaas waxaa Dhacaya furitaanka Dokumentiyada tartamayaasha ( Bid Opening) .
Tartame kasta waa in u soo gudbiyaa Xafiiska Qandaraasyada ee D/hoose Bosasao 3copy oo ka mid ah dokumintiga Qandaraaska uu ka qaybgalayo .
Xafiiska Qandaraasyada ee D/hoose waxaa uu ku yaal Xarunta weyn ee D/hoose Bosaaso .
Qandaraaska waxaa la furayaa iyadoo ay goobjoog yihiin tartamayaasha ama wakiilladooda.
Tartamayaasha u baahda xog dheeraad ah waxa ay la xiriiri karaan Xafiiska Qandaraasyada ee Degmada Bosaaso ,Tell:-0907798412/[email protected] , [email protected] or
Waxyaabaha loo baahan yahay in lagu soo lifaaqo Buugga Qandaraas qaataha waa sida hoos ku Qoran ;-
1 Original – Certificate of registration From the district
2 Original – Receipt of each bid document ($20) From the district
3 Copy – Completion projects The past three years completed projects (UN, INGOs etc)
6 Bid fully prices Quotation with all additional
Costs (transportation, taxation and other costs)
7 Bid signing To sign and to stamp the bidding documents ( quotation forms)
8 Banks Statement Bank Statement Update
FG:- waxaa la ogaysiinayaa cidkasta oo danaynaysa in ay ka qaybgasho Qandaraaska in maalinta Arbacada taariikhduna ku aadan tahay 29 bisha September /2021 lagu qabandoono tababar Xafiis Qandarasyada si looga caawiyo Qandaraas qaatayaasha Qaabka ay buugta ( Bid) ama Dalab qandaraaska ay u soo buuxin lahaayeen .
La Deg Document-ga oo dhamaystiran Soomali Vertion 2021xayaysiin (2) sax
Prepared by procurement Officer
Ahmed Mohamed Da’ar
Fursadaha 318 Ogeysiis 100 Wararka 28793